သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေထဲက ဂေါ်မစွံတဲ့အပျိုကြီးတွေကို စနောက်အရွှန်းဖောက်လိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင် – သုတရသ
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ခေးဆက်သွင်ကတော့ နန်းဆန်တဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ အပြူအမူအပြောလေးတွေေ ကြာင့် ပုရိသတွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို
အပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ ရရင်ရသလိူ အလှူဒါန လေးတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့မင်း သမီးလေးဆို လည်း ဟုတ်ပါတယ်နော်..။ ဒါ့အပြင်မင်းသ မီးချောလေးခေးဆက်သွင်ကတော့ MRTV- (4) ဇာတ်လမ်းတွဲမင်း
သမီးလေးဖြစ်တဲ့အပြင် အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ‌ကောင်းလွန်းတဲ့ မင်းသမီး လေး ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။ အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” အညို ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ
အားပေးခံခဲ့ ရတာ ဖြစ် ပြီး ” နှင်းဆီ ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ” နှင်းဆီ ” ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆော င်နိုင်ခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေ့မှာတော့ ” ဘယ်သူ့ကိုမှ ဝင်လာပါလို့ တစာစာမခေါ်သလိုဘယ်အရာကိုမှ
ထွက်မသွားပါနဲ့လို့ဆွဲမထားတတ်တာကြာပြီလား……ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကို လက်ခံပြီးအရှိအတိုင်း လောကကြီးကို ဟားတိုက်လို့ခပ်မို က်မိုက်ရယ်မောတတ်နေပြီလား…..အခက်အခဲလှေကားထစ်တွေကို တစ်ဆင့်ခြင်းနင်းဖြတ်
ရင်းနင်လားဟဲ့ လောကဓံလို့ တစ်ယောက်တည်းအာခံနိုင်ပြီလား…….မျက်ရည်နဲ့ ညတွေကို ကျော်ဖြတ်ရင်းဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့လူတွေကြားထဲ ချည်းနင်းဝင် ရောက် နေပြီလား…..အဓိကနဲ့သာမညကိုရေရေလည်လည်
ခွဲခြားတတ်ပြီးဟင်ဆိုတာနဲ့ ချာကနဲလှည့်ထွက်တတ် နေပြီလား…. .ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လိုက်လျော ညီထွေစီကာ ပတ်ကုံးပြောလို့အမြဲပြုံးနိုင်ပြီတဲ့လား…..အပေါ်ကစာတွေဖတ်ရင်းငါနဲ့တူတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးပျော်နေ
ရင်သေချာတယ်ခင်ဗျားအပျိုကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီ😝😝😝😝 ” ဟုဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမပရိသတ်တွေကိုစနောက်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး ခေးဆကျသှငျကတော့ နနျးဆနျတဲ့အလှကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး တညျငွိမျအေးဆေးတဲ့အပွုံးလေးတှနေဲ့ အပွူအမူအပွောလေးတှေေ ကွာငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားသူပါ။
ဖွူစငျတဲ့စိတျထားလေးနဲ့ ရရငျရသလိူ အလှူဒါန လေးတှပွေုလုပျတတျတဲ့မငျး သမီးလေးဆို လညျး ဟုတျပါတယျနျော..။ ဒါ့အပွငျမငျးသ မီးခြောလေးခေးဆကျသှငျကတော့ MRTV- (4) ဇာတျလမျးတှဲမငျး သမီးလေးဖွဈတဲ့အပွငျ အမွဲပြျောပြျောနတေတျပွီး
သရုပျဆောငျ ‌ကောငျးလှနျးတဲ့ မငျးသမီး လေး ဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ အခဈြပိုနရေသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။ အရိပျဇာတျလမျးတှဲမှာ ” အညို ” ဆိုပွီး ပရိသတျတှေ အားပေးခံခဲ့ ရတာ ဖွဈ ပွီး ” နှငျးဆီ ” ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး ” နှငျးဆီ ”
ဇာတျကောငျနဲ့ ပရိသတျတှကေိုဆှဲဆော ငျနိုငျခဲ့သူလေးဖွဈပါတယျ..။ ဒီနမှေ့ာတော့ ” ဘယျသူ့ကိုမှ ဝငျလာပါလို့ တစာစာမချေါသလိုဘယျအရာကိုမှ ထှကျမသှားပါနဲ့လို့ဆှဲမထားတတျတာကွာပွီလား……ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုတိုငျးကို လကျခံပွီးအရှိအတိုငျး
လောကကွီးကို ဟားတိုကျလို့ခပျမို ကျမိုကျရယျမောတတျနပွေီလား…..အခကျအခဲလှကေားထဈတှကေို တဈဆငျ့ခွငျးနငျးဖွတျရငျးနငျလားဟဲ့ လောကဓံလို့ တဈယောကျတညျးအာခံနိုငျပွီလား…….မကျြရညျနဲ့ ညတှကေို ကြျောဖွတျရငျးဘာမှမဖွဈသလို
ဟနျဆောငျခွငျးနဲ့လူတှကွေားထဲ ခညျြးနငျးဝငျ ရောကျ နပွေီလား…..အဓိကနဲ့သာမညကိုရရေလေညျလညျ ခှဲခွားတတျပွီးဟငျဆိုတာနဲ့ ခြာကနဲလှညျ့ထှကျတတျ နပွေီလား…. .ဘယျနရောရောကျရောကျ လိုကျလြော ညီထှစေီကာ ပတျကုံးပွောလို့အမွဲပွုံးနိုငျပွီတဲ့လား…..အပျေါကစာတှဖေတျရငျးငါနဲ့တူတယျဟဲ့ဆိုပွီး
ပြျောနရေငျသခြောတယျခငျဗြားအပြိုကွီးတဈပိုငျးဖွဈနပွေီ😝😝😝😝 ” ဟုဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမပရိသတျတှကေိုစနောကျခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အား လခပ်လန်းလန်း ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်